UKUBUKA KWECHIBI #4 IGUMBI LESIvakashi INOBUNGANE
Itholakala khona kanye ku-Pacific Ocean enhle, i-Casa Coco inechibi lokubhukuda elingamamitha angama-25, indawo yokudlela yangaphandle kanye nokushona kwelanga okumangalisayo. Le ndawo evumela ukuphumula, yokudlela yothando nokunakwa okuningiliziwe okunikezwe ukudala ukuhlala okukhumbulekayo.
Sitholakala kalula iminyango emi-3 ukusuka e-Casa Mañana Hotel futhi siyishayela elisheshayo eliya e-Atikama. I-San Blas iyimizuzu engama-22 yescenic drive. I-Playa Los Cocos iseyipharadesi elifihliwe. Ngesizini yehlobo/yemvula ukufinyelela olwandle kunomkhawulo.
Leli gumbi lokulala lezivakashi lifakwe umbhede olingana inkosi, ifeni yosilingi, isiqandisi esincane/ifriji, i-microwave encane, i-oven ye-toaster kanye nesikhipha amanzi. Indlu yokugezela ye-en-suite (enamathiselwe) ineshawa efakwe amathayela, usinki kanye nendlu yangasese. Igumbi lokulala linendawo eningi yekhabethe, futhi, kukhona i-TV yesikrini esiyisicaba esinesidlali seDVD. Izivakashi zikwazi ukufinyelela inqwaba yama-DVD ezingakhetha kuwo. Wonke amathawula okugeza namalineni ahlinzekwa futhi igumbi lokulala libheke endaweni yokubhukuda. futhi ine-balcony. Ngenxa yendawo yaleli gumbi isignali ye-WIFI ayinamandla kodwa iyatholakala ezindaweni ezithile zendawo.
Izintengo zisuselwe kuzihambeli ezingu-2 noma ngaphansi. Izivakashi ezengeziwe ngu-$500 pesos isivakashi ngasinye ubusuku ngabunye. Kunendawo ye-BBQ yangaphandle lapho izivakashi zingalungisa khona ukudla kwazo. Singakwazi ukuhlalisa izivakashi ezingafika ku-14 kule ndawo.
4.81(27 okushiwo abanye)
I-Atikama umphakathi omncane odobayo ohlinzeka ngezindawo zokudlela ezincane ezibheke olwandle ezihlinzeka ngezinhlanzi ezintsha. Ibhishi lase-Atikama laziwa ngokuthi i-Playa Matanchen futhi lingelinye lamabhishi abanzi kakhulu futhi anosanti kunawo wonke e-Mexico. I-Atikama inikeza ama-rock oyster, izimfanzi kanye ne-rock lobster, kanye ne-mahi mahi ne- robalo. Eduze kunenye idolobhana labadobi elibizwa ngokuthi iSan Blas elinabantu ababalelwa ku-12000. Itholakala ku-62 KM enyakatho-ntshonalanga yeTepic, inhloko-dolobha yesifunda saseNayarit. I-San Blas inikela ngezinto ezehlukene okumele zenziwe njengokubukela imikhomo, ukubuka izinyoni, ukuntweza emanzini kanye nokudoba kwezemidlalo.
Ibhishi elise-El Limoncito eliqhele ngebanga elifushane lingenye yezindawo ezinokuthula ezinhle kakhulu nezingakaze zithintwe ongazithola.
Leli khaya lenzelwe ukunikeza zonke izihambeli indawo yazo kanye nokubanikeza okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele. Ababungazi bakho noma othintana naye wendawo bakhona uma udinga isiqondiso noma iseluleko mayelana nekhaya nendawo ezungezile.
Leli khaya lenzelwe ukunikeza zonke izihambeli indawo yazo kanye nokubanikeza okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele. Ababungazi bakho noma othintana naye wendawo bakhona uma udinga…